Elekọta ndị okenye: Olee otu anyi ga - esi zere ịda? | Ngwọta OMG
Okenye okenye: Olee otú anyị ga esi zere ịda?
Dịka otu akụkọ sitere na Ụlọ Ọrụ United States maka njikwa ọrịa na mgbochi, a chọpụtawo na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị mmadụ, na ọgbọ nke 65 na n'elu, na-ada ihe kariri otu ugboro kwa afọ.
Mmiri nwere ike iduga na nsogbu:
Egbugbu na Ndị Sprains
Nsogbu na isi isi
Ibu akpa na ikpuchi
Akpụkpọ ụkwụ na eriri ụkwụ
Ịda egwu nke na - eme ka mmechi ihe na njedebe nke obi ike.
E kwuwo na, ndị okenye nwere ụda nke 12 ugboro ugboro karịa ma e jiri ya tụnyere nke ihe mberede ụgbọala na ụgbọala.
Anyị nwere ike igbochi ọdịda?
Ee, a pụrụ igbochi ọdịda. Mmiri dị mma. Imirikiti ihe ndị nwere nsogbu nwere ike gbanwere ngwa ngwa. Ọ bụrụ na mmadụ nwere mmerụ ahụ ma ọ bụ nwee ọdịda, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ dọkịta maka nke ahụ iji gbochie ihe ọ bụla siri ike.
"Mgbochi dị mma karịa ọgwụgwọ."
Kedu ka anyị ga esi zere ịda?
Iji zere ọdịda, ịgbaso ihe ga-emejuputa:
Mmega: Iji zere ịda, ị ghaghị ịkwado onwe gị nke ọma. Iji bụrụ onye kwesịrị ekwesị ma dị mma, mmega ahụ kwesịrị. Ị nwere ike isonyere ụdị mmemme mmemme dị iche iche na nso ụlọ gị. I nwekwara ike na-ele ma na-amụta ụdị yoga dịgasị iche iche, ma na-eme ihe n'ịntanetị, ma mejuputa ihe ndị ahụ na-eme kwa ụbọchị.
Wea akpụkpọ ụkwụ: Ị ga-eyi akwa akpụkpọ ụkwụ dị mma. O kwesiri idowe ya.
Kedu ka anyị nwere ike isi meziwanye nchekwa n'ime ụlọ anyị?
Jide n'aka na corridors ahụ doro anya na nke ọma.
Wepu ntuchi ma ọ bụrụ na ọ bụla.
Nwee ọkụ nke ọma n'ụlọ gị. Gbaa mbọ hụ na ebe niile dị n'ụlọ gị nwere ọkụ kwesịrị ekwesị. You nwere ike iji CFL, nkwụnye - na ọkụ abalị, ọkụ na-enwu enwu.
Hụ na ngwá ụlọ nke ụlọ gị anaghị enwe nkọ / n'akụkụ.
Hụ na enwere ike mepee ọnụ ụzọ niile nke ụlọ gị ma mechie ọnụ.
Jide n'aka na ụlọ gị kwesịrị inwe usoro nchebe kwesịrị ekwesị. Dị ka usoro egwu, ọkụ ọkụ ma ọ bụ ihe mkpuchi ọkụ.
Ị ga-enwerịrị ngwa ahụike ahụike (nchekwa nchekwa) n'ụlọ gị.
Jide n'aka na akwa na oche nke ụlọ gị siri ike.
Kedu ka esi meziwanye nchekwa n'èzí ụlọ anyị?
Igbu ahihia, ihe ndi ozo, na ihe ndi ozo nke na-eme ka uzo di uzo.
Gbalịa mee ka ụzọ ahụ dinara ụra.
Na-ekpuchi okpu na ugogbe anya maka anwụ iji zere ìhè anyanwụ.
Mgbazi gbawara agbaji, gbajie agbaji, na ụzọ mgbochi.
Jide n'aka na ihe ndị dị n'èzí dị ọkụ.
Gbanyụọ ngwaọrụ ubi.
Nọgide na-adị mma
Lelee anya n'ime otu ọnwa ma ọ bụ abụọ.
Ọ bụrụ na enwere nsogbu ndị metụtara ụkwụ, gbakwunyere podiatrist n'ime oge ọ bụla.
Gaa dọkịta ma ọ bụ ndị ọkachamara ahụike ọzọ gbasara nri gị na nsogbu ndị ọzọ metụtara ya.
"Nri siri ike bụ isi ihe dị mma n'uche."
Ihe ị ga-echeta ma ọ bụrụ na ị daa:
Atụla ụjọ. Nọrọ nwayọọ.
Kpọọ maka enyemaka!
Kpọọ 911 (ọrụ mberede) maka enyemaka ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Gbalịa ịkpọ ndị agbata obi gị ma ọ bụ dọkịta gị.
Ọ bụrụ na i nwere ike ibili ma mee ihe ahụ n'onwe gị:
Gaa na ọnọdụ na-asọ oyi.
Gwuo ebe nchekwa.
Gbalịa ibili ọtọ gị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ijikwa ọnọdụ ahụ:
Gbalịa ịkwaga ebe nchekwa.
Mee oké mkpọtụ ka ndị nọ gị nso nụ ya, ị nwere ike ịjụ ha maka enyemaka.
Ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-anụ olu gị ma gbalịa ịkwaa onwe gị, ma gbalịa ibili ọzọ mgbe e mesịrị.
Nzuzo 7028 4 Echiche Taa